Maraykanka oo hakinaya dhaqaalaha uu siiyo Itoobiya – Idil News
Maraykanka oo hakinaya dhaqaalaha uu siiyo Itoobiya
Posted By: Jibril Qoobey August 30, 2020
Maraykanka ayaa hakinaya kaalmada dhaqaale ee uu siiyo dalka Itoobiya, arintaasi oo salka ku haysa khilaafka ka taagan biyo-xireenka uu waddankaasi ka dhisayo webiga Nile.
Jariirada Foreign Policy ee ka soo baxda Maraykanka ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay saameyn karto 130 milyan oo dollar oo ay xukuumadda Washington ku kabto Ethiopia.
Tallaabadan oo uu meel-mariyay xoghayaha arimaha dibedda ee Maraykanka Mike Pompeo, ayaa sii xumeyn karta xiriirka u dhexeeya Washington iyo Addis Ababa, xilli Itoobiya ay wado qorshe ay ku buuxineyso biya xireenka uu muranka ka taagan yahay.
Sida ay sheegtay jariirada Foreign Policy, dhaqaalaha uu doonayo Maraykanka inuu hakiyo ayaa saameyn ku yeelan kara dhinacyada ammaanka, la dagaallanka argagixisada, tababarka ciidamada iyo ka hortagga tahriibka ee Itoobiya.
Jariirada oo soo xigatay mas’uuliyiin ka tirsan congress-ka ayaa sheegtay inay dhici karto in lacagtaasi ay ka yaraato 130-ka milyan ee la qiyaasay.
Haddii ay dhaqangasho hakintan, waxa ay caqabad ku noqon kartaa qorshaha Itoobiya ay ku buuxineyso biyo xireenka, sida ay qabaan khubarada ka faalooda xiisadda ka taagan webiga Nile.
Mas’uuliyiin ka tirsan Itoobiya ayaa horay u sheegay in Maraykanka uu u xaglinayo dhanka Masar oo doonaysa in heshiis laga gaaro buuxinta biyo xireenka.
Masar ayaa ku doodaysa in biyaha Nile ay u leeyihiin mudnaan amniga qarankeeda kamid ah, waxaana warbixin uu bishii July daabacay Mac-hadka Qorsheynta Qaran ee dalkaasi lagu sheegay in 12 nooc oo kamid ah kalluunka ay dabargo’i doonaan biyo xireenka awgii.
Wadaxaajoodkii ugu dambeeyay ee wasiiradda biyaha ee dalalka Itoobiya, Masar iyo Sudan ay Jimcihii ka yeesheen arinta biyo xireenka ayaa ku soo idlaaday natiijo la’aan.